Marqaanmedia|Daily News » WAR CUSUB :Cabdikarim Guuleed Oo Sheegay In Xilka Qaadistiisa Puntland laga Soo Abaabuley
6 Responses to WAR CUSUB :Cabdikarim Guuleed Oo Sheegay In Xilka Qaadistiisa Puntland laga Soo Abaabuley
Geele says:	January 11, 2017 at 12:12 pm	War ma doorashad soomaliyaa loo xilsaarey mlse galmudug buu xil u hayey klkkkkkkk
Somali says:	January 11, 2017 at 12:24 pm	Kkkk geele,ADBA
Atoore says:	January 11, 2017 at 1:16 pm	Asc.
boondheere says:	January 11, 2017 at 1:29 pm	WARYAADA REER MARQAAN NEWS
Adduunyo says:	January 11, 2017 at 1:54 pm	Nin daad qaaday xumbo cuskay. Taasi waxay ka dhigan tahay ayadooba uusan meesha ka jirin wax maamula in dad kale lagu eedeeyo. Horta awalba wax maamul ah oo qorshaysan ma ahayn,ee wuxuu ahaa ka gaarsii aan doorasho ku galneeh iyo garab roortan iyo yaan lagaa badin,waana caadifadda iyo Garaad gaabnida reeraha qaribay iyo siyaasad xumadooda,ee lagu yaqiin. Caddaalad iyo hogaanna ka dheer,is maamul iyo kala danbayn, samir iyo xishood iyo ixtiraam.
cubeyd says:	January 11, 2017 at 5:08 pm	Duniyo